नेपाल भ्रमण वर्षः योजना २० लाख पर्यटक भित्र्याउने, तयारी शून्य! - कारोबार - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
सचिवालय नै स्थापना हुन सकेन
समुन्द्रा घिमिरे काठमाडौं चैत २२
आगामी वर्ष सन् २०२० लाई ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’को रुपमा मनाउने भन्दै सरकारले घोषणा गरेको योजनाको तयारी भने त्यसअनुरुप हुन सकेको छैन।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ मा बजेट वक्तव्यमै ‘२० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी भिजिट नेपाल २०२० सञ्चालन गरिने’ योजना अघि सारेका थिए।
गत फागुन २८ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ पारित भइसकेको छ भने सोहीअनुसार कार्यक्रमको मूल आयोजक समिति पनि गठन भइसकेको छ।
मूल संयोजक नहुँदा अन्य काम प्रभावित
पर्यटनमन्त्रीको अध्यक्षतामा ४७ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था कार्यविधिले गरे पनि अहिले पर्यटनमन्त्री नै छैनन्। पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको गत फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएको डेढ महिना हुनलाग्दा समेत नयाँ पर्यटनमन्त्री नियुक्त नहुँदा भ्रमण वर्षको तयारी अलमलमा परेको छ।
मूल आयोजक समितिका संयोजक पर्यटनमन्त्री रहेका कारण संयोजकको अभावमा अन्य समितिले समेत प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ।
एउटै कोठामा खुम्चियो सचिवालय
त्यस्तै कार्यविधिको अनुसूची ३ अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उपसमिति गठन भइसके पनि तिनले काम गर्ने स्थान नै पाउनसकेका छैनन्। समितिका अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा रहेका छन् भने उपाध्यक्षमा व्यवसायी तथा भ्रमण वर्ष कार्यक्रम राष्ट्रिय संयोजक सुरज वैद्य तोकिएका छन्। समितिका अन्य १७ सदस्यमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु रहेका छन्। कार्यविधिअनुसार गठित उपसमितिको सचिवालय स्थापना गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म हुनसकेको छैन।
सचिवालय नै स्थापना नहुँदा उपसमिति पर्यटन बोर्डको कार्यालयको एक कोठामा खुम्चिन पुगेको छ। गत कात्तिक दोस्रो सातामै व्यवसायी वैद्य सचिवालयको संयोजक तोकिए पनि सचिवालय व्यवस्थापन भने अलपत्र बनेको छ। पाँच महिना बित्दा पनि सचिवालयको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने उपसमितिले बाँकी ८ महिनामा सबै तयारी पूरा गरिसक्नेमा आशंका उब्जिन थालेको छ।
पोखराबाट भ्रमण वर्षको सुरुवातः वैद्य
सचिवालयका संयोजक वैद्यका अनुसार नयाँ वर्षको वैशाख १ गते पर्यटकीय नगरी पोखराबाट भ्रमण वर्ष कार्यक्रम औपचारिक रुपमा सुरु हुनेछ। गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन एभरेस्ट ब्रेकफास्ट, हेली टुर, जंगल सफारी, योगा रिट्रिट सेन्टर, बड वाचिङलगायत पर्यटनसँग सम्बन्धित महंगा गतिविधिको बोर्डले प्रचार गर्दै आएको छ। यसैगरी नेपालमा उत्पादन हुने हस्तकला, चियाजस्ता उत्पादनहरुको डिजिटल मार्केटिङ गर्ने योजनामा बोर्ड छ।
एक पर्यटकबाट प्रतिदिन ६५ डलर खर्च गराउने योजना
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा प्रतिपर्यटक प्रतिदिन ६५ डलर खर्च गर्नेगरी योजना बनाउने सरकारको तयारी छ। त्यस्तै उनीहरुको बसाइ अवधि १४ दिन पु¥याउने लक्ष्य पनि सरकारले राखेको छ। सन् २०१८ को ११ महिनामा नेपालमा १० लाख पर्यटक भित्रिएकोमा प्रतिपर्यटक प्रतिदिन खर्च ५४ डलर खर्च गरेको नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्यांक छ। पर्यटकहरु नेपालमा औसत १२ दिनसम्म बस्ने गरेका छन्।
तीन महिलालाई सगरमाथा आरोहणका लागि पठाइने
पर्यटन वर्षलाई लक्षित गरी यस वर्षको सगरमाथा आरोहणका लागि तीन जना महिला प्रतिनिधिलाई पठाइने भएको छ। नेपालका विभिन्न क्षेत्र पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा छन् भन्ने चिनाउन सगरमाथा आरोहणको तयारी गरिएको बैद्यले नेपालखबरलाई जानकारी दिए। उनले भने, ‘नेपालमा महिलाले केही गर्न सक्छन्, सबै समान हुन भन्ने देखाउन महिलालाई लक्षित गरि सगरमाथा आरोहणमा पठाउन लागेका हौँ। आरोहण दलमा तीन जना महिलामा हुनेछन्। सगरमाथा आरोहण गरिसकेको महिलाको नेतृत्वमा छिमेकी देश चीन र भारतका एक÷एक महिला पठाउछौँ। उनीहरुको आरोहणको सम्पूर्ण जिम्मा (खर्च) भ्रमण वर्ष मूल आयोजक समितिले व्यहोछ।’
सगरमाथाको शिखरबाटै भ्रमण वर्षको शुभारम्भ
सचिवालय संयोजक वैद्यका अनुसार सगरमाथा आरोहणमा गएका तीन महिलाले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को घोषण सगरमाथा शिखरबाटै गर्नेछन्। नेपालीसहित सगरमाथा आरोहणका लागि गएका दुई विदेशीको साथमा शिखरबाटै घोषणको तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए। नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा महिलाले केही गर्न सक्छन् भन्ने कुरा विश्वसामू देखाउन सहयोग पुग्ने उनले दाबी गरे।
प्रकाशित २२ चैत २०७५, शुक्रबार | 2019-04-05 17:02:18